Sefania 2 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
2 Mommoaboa mo ano, ɔman a moatõtõ mo ani awe,+ mommoaboa mo ano.+ 2 Ahyɛde no nnya mmaa mu yi,+ ɛda no nnya ntwaam sɛ ntɛtɛwa yi, Yehowa abufuhyew+ nnya mmaa mo so yi, Yehowa abufuw da+ no nnya mmaa mo so yi, 3 monhwehwɛ Yehowa,+ asase so ahobrɛasefo+ a mudi n’atemmusɛm so. Monhwehwɛ trenee,+ monhwehwɛ ahobrɛase.+ Ebia+ wɔbɛkora mo so, Yehowa abufuw da no.+ 4 Wobegyaw Gasa ato hɔ+ na Askelon ayɛ amamfõ.+ Wɔbɛpam+ Asdod+ awia ketee na wɔatu Ekron ase.+ 5 “Mo a motete mpoano, Keretifo+ man, munnue! Yehowa ne mo wɔ asɛm. O Kanaan, Filistifo asase, mɛsɛe wo na obiara renka.+ 6 Mpoano asase bɛdan mmoa adidibea,+ baabi a nguanhwɛfo mmura wɔ, baabi a wɔde abo ayɛ nguannan. 7 Na ɛbɛyɛ Yuda fie nkae+ no asase, na ɛhɔ na wobedidi. Wɔbɛdeda Askelon afie mu anwummere adwudwo wɔn ho. Na Yehowa wɔn Nyankopɔn bɛdan n’ani aba wɔn so+ na ɔde wɔn nnommum asan aba.”+ 8 “Mate Moab ahohorabɔ+ ne Ammonfo adapaatwa+ a wɔde sopa me man, ne wɔn ho a wɔhoahoa tia wɔn asase no. 9 Enti sɛ mete ase yi,”+ asafo Yehowa Israel Nyankopɔn asɛm ni, “Moab bɛyɛ sɛ Sodom+ na Ammon+ ayɛ sɛ Gomora; ɛbɛyɛ nsasono asase ne nkyene amoa ne amamfõ akosi daa.+ Na me nkurɔfo a wɔaka no bɛfow wɔn na me man nkaefo adi wɔn so.+ 10 Eyi ne aba a wobetwa afi wɔn ahantan+ so, efisɛ wɔbɔɔ asafo Yehowa man ahohora, na wɔhoahoaa wɔn ho tiaa wɔn.+ 11 Yehowa ho bɛyɛ wɔn hu,+ efisɛ ɔbɛma asase so anyame nyinaa atwintwam,+ na aman nyinaa befi mmeaemmeae abɛkotow no,+ nsuano aman+ nyinaa. 12 “Mo Etiopiafo+ nso, mobɛtotɔ me nkrante ano.+ 13 “Na ɔbɛteɛ ne nsa akyerɛ atifi fam na wasɛe Asiria.+ Ɔbɛma Niniwe adan amamfõ,+ na ɛhɔ bɛwo wosee sɛ sare so. 14 Mmoa nyinaa, asase so mmoadoma nyinaa bɛba abedwudwo wɔn ho wɔ hɔ.+ Na pokupoku ne kɔtɔkɔ+ bɛdeda n’adum+ so anadwo. Wobɛte wɔn su wɔ mfɛnsere mu. N’apongua bɛsɛe, efisɛ nnua+ a wɔde asiesie hɔ no ho bɛda hɔ. 15 Kurow a edi ahurusi na ne ho adwo no+ no awiei ni, kurow a ɛka ne komam sɛ, ‘Me ara mini, na obiara nni hɔ bio’+ no. Hwɛ sɛnea wadan ahodwiriwde, baabi a mmoadoma dwudwo wɔn ho! Obiara a obetwam wɔ hɔ no bɛbɔ hwirema na wabɔ ne nsa ano.”+